OwamaProteas ubheke ukunqoba uchungechunge lwe-T20
UTEMBA Bavuma ukaputeni wamaProteas ufuna baqhubeke nomgqigqo abaqale ngawo kuchungechunge lweT20 ne-India ukuze bagcine belunqobile Isithombe: BACKPAGEPIX
Xolile Mpisane | June 14, 2022
UFUNA bazimisele kakhulu kunakuqala emdlalweni olandelayo we-T20 ne-India ukaputeni weqembu laseNingizimu Afrika lekhilikithi labesilisa, uTemba Bavuma.
AmaProteas ahamba phambili ngo 2-0 kulolu chungechunge lwemidlalo emihlanu ngemuva kokunqoba owokuqala eNew Dehli ngamawikhethi ayisikhombisa ngoLwesihlanu nowesibili ngamawikhethi amane e-Cuttack ngeSonto.
Ngemuva kokuwina ithosi kowesibili, amaProteas akhethe ukushwiba kuqala, i-India yashaya ama-run angu-148 kuma-overs angu-20, isilahlekelwe amawikhethi ayisithupha.
Iqembu lakuleli lifinyelele kuma-run angu-149 kuma-over angu-18.2, selilahlekelwe amawikhethi ayisithupha. UHeinrich Klaasen uqokwe njengomdlali ovelele ngemuva kokuhlohla ama-run angu-81 emabholeni angu-46.
UBavuma uncome abashwibi ngokucabela ababhethayo indlela yokunqoba umdlalo.
"Bekuwusuku oluhle kithina. Siwutholile umphumela ebesiwufuna. Ngicabanga ukuthi lokho kuqale ngokushwiba. Siqale ngendlela ebesihlose ukuqala ngayo. Sikwazile ukubafaka ngaphansi kwengcindezi ngokuthatha amawikhethi futhi kusisebenzele lokho,” kusho uBavuma.
"Ngicabanga ukuthi besingabhetha kangcono, ikakhulukazi ngasekugcineni. Nokho sizowuthatha lo mphumela futhi sihalalisela uKlaasen ngokulishaya kahle ibhola.
“Sijabule ngokunqoba kodwa ngeke sikhululeke ngoba asinaso isikhathi esiningi ngaphambi kokuthi sidlale umdlalo olandelayo.”
UBavuma uthe kubalulekile ukuthi amaProteas azame ukuluthatha uchungechunge uma la maqembu womabili ehlangana emdlalweni wesithathu e-Visakhapatnam namhlanje ngo-3.30 ntambama futhi angavumeli i-India ukuthi ithole iwini yokuqala engabanika ithuba lokulwa.
"Sinochungechunge okufanele silunqobe, siseneminye imidlalo emithathu. Kusobala ukuthi sizogxila emdlalweni olandelayo, sizame ukufeza izinto ezincane esizibekele zona. Sizothatha umdlalo ngamunye,” kusho uBavuma.
“Ngemuva kwe-India sizophinde sizihlole ukuthi sikuphi njengeqembu sibone ukuthi siyaphi. Okwamanje sinomdlalo esifuna ukuwunqoba, kumele sizimisele kakhulu ngoba siyazi ukuthi i-India iyiqembu eliyingozi. Asikawuqedi umsebenzi."
Ngemuva kwalolu chungechunge lwe-T20 ne-India ama-Proteas azothatha uhambo oluya e-England ngenyanga ezayo.